Bit By Bit - The n'ọdịnihu - 7.2.1 The agakọ nke Readymades na Custommades
Maọbụ a dị ọcha Readymade atụmatụ ma ọ bụ a dị ọcha Custommade atụmatụ n'ụzọ zuru ezu utilizes na ike nke dijitalụ afọ. N'ọdịnihu na anyị ga-imepụta adọ ụdị ụfọdụ.
Ná mmalite, m iche na Readymade style nke Marcel Duchamp na Custommade style nke Michelangelo. Nke a iche nakwa captures a dị iche n'etiti data ọkà mmụta sayensị, bụ ndị na-agbasaghị arụ ọrụ na Readymades, na-elekọta mmadụ ndị ọkà mmụta sayensị, bụ ndị na-agbasaghị arụ ọrụ na Custommades. N'ọdịnihu, Otú ọ dị, m na-atụ anya na anyị ga-ahụ ihe adọ ụdị ụfọdụ n'ihi na onye ọ bụla n'ime ndị a dị ọcha na-eru nso na-ejedebeghị. Researchers na-nanị chọrọ iji Readymades na-aga ọgụ na mgba n'ihi na e nwere ọtụtụ mara mma Readymades na ụwa. N'ihi ya, na-eme nnyocha n'ịnọgide na nke a dị ọcha style na-ma aga na-achụ n'àjà, àgwà site na iji jọrọ njọ Readymades, ma ọ bụ na ha na-aga na-emefu ọtụtụ nke oge na-achọ zuru okè urinal. Researchers na-nanị chọrọ iji Custommades, na aka nke ọzọ, na-aga àjà n'ike. Ngwakọ eru nso, Otú ọ dị, nwere ike ikpokọta na ọnụ ọgụgụ na-abịa na Readymades na uko kwesịrị ekwesị n'etiti ajụjụ na data na-abịa site Custommades.
Anyị hụrụ ihe atụ nke ndị a adọ ụdị ụfọdụ nke ọ bụla n'ime ihe anọ ahụ ahụrụ anya isi. Ke Ibuot 2, anyị hụrụ otú Google Flu Trends-agwakọta ihe mgbe niile-na nnukwu data usoro (search gbara ajụjụ) na a gbasara nke puru omume ndị dabeere na omenala mmesho usoro (CDC influenza onyunyo usoro) na-emepụta ngwa ngwa atụmatụ (Ginsberg et al. 2009) . N'Isi nke 3, anyị hụrụ otú Stephen Ansolabehere na Eitan Hersh (2012) jikọtara omenala mere nnyocha e mere data na njikere mere ọchịchị administrative data iji mụtakwuo banyere ji mara ndị na-n'ezie votu. N'Isi nke 4, anyị hụrụ otú ndị OPower nwere na ikpokọta njikere mere ọkụ eletrik mmesho akụrụngwa na omenala mere omume na-amụ mmetụta nke na-elekọta mmadụ norms na omume a oke ọnụ ọgụgụ (Allcott 2015) . N'ikpeazụ, ke Ibuot 5, m gwara gị banyere otú Kenneth Benoit na ibe (2015) etinyere omenala mere ìgwè mmadụ-nzuzo usoro a njikere mere set nke manifestos kere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ iji ike data na-eme nnyocha nwere ike iji na-amụ ntuli aka na Ọnọdụ nke iwu nrụrịta ụka.
Anọ ndị a ihe atụ niile na-egosi na a dị ike atụmatụ na-eme n'ọdịnihu ga-adị ka ọgaranya nnukwu data isi mmalite, nke na-adịghị anakọtara maka nnyocha, na ozi ndị ọzọ na-eme ka ha kwesị ekwesị maka nnyocha (Groves 2011) . Ma ọ amalite na Custommade ma ọ bụ ndị Readymade, nke a ngwakọ style esetịpụ oké nkwa maka ọtụtụ nnyocha nsogbu.